Ummanii Oromoo Ijoolee isaa irratti caalisuu hin qabuu.
Magaaloon Oromiyya Finfinneeti dabalamuun Heera fi Seera Federla Ethiopia waan cabsuuf Hanga dhummati ni Mormina Baratoota Oromoo fi Uumataa Oromoo: 1/12/2015 Uni kara naga gaafi keenya Bulchisa Universitit utuu dhiyeefacha jiru Waraan Federala Agaziin University seene Barata Ajeesuu egalee jeedhu Baratooni University Haromayaa.
Baratoon Oromoo Kara naga FDG geggesuu 25/11/2015 egalan. Mootummaa biyyati kan ofiin jeedhu gaafi baratoota kana kara naga simatee deebi keenuu qaba ture. Bara 2014 gaafiin baratoota deebi dhabuun isaa lubu namoota 100 ol galafachuu isaa utuu beekan gaafii ummataa irra dedebi’ee ka’aa jiru kun deebii haqaa akka barbaduu mootummaan deebi haqaa keenu qaba ture. Baratooni Oromoo guyya duratti kassan hirira mormii magaaloota Inciini,Mandii, Qiltu karraa, Goorii, Najjoo, Ambo, Gincii, Aira Guliso kkf kara naga egalan gara gutuu Oromiyaati babalachun kara naga geggefama ture. University Haromaya Keessatti kara naga kan egalamee yaamuu ta’uu baratoon Ogannoota University hayama gaafachuun utuu mora keessa hin ba’iin Bulchiinsa Universityti yeroo gaafi isaan dhiyeessan lola irratti banan. Mootumman Federalaa seeran ala university keessatti Agazii bobasun baratoota ajeesisuun yakka gudadha, sababin isaa baratoota meesha tokko ilee hin qabneti humnan waraana bobasuun itti nama gaafachisa.
Mootumman kana irra darbee yeroo ammaa kana universitii haramayaattii qeequmsa ka’ee qabaneesuu poolisii nannoo oromiyaa utuu yaalii goocha jiru Waraani Agaazii polisoota naannoo oromiyaa irraatti waraana banun nama 3 ajeesuu isaantu dubatama.
Oromiyaan Naannoo ishee keessatti sochii baratoota tasagabeesuuf ga’uumsa ni qabdii waraan Federalaa baratoota ajeesuu boba’uu seera federalaa kan cabsuudha. Oromiyaa irratti osoo humni poolisa Oromiyaa jiruu poolisni Federaalaa Oromiyyatti boba’ee ijoolee Oromoo ajeesuun maal jeechu dha? Qondaalotaa fi miseensota OPDO, isanuu cunqursaa hamaa jala waan jirtanif, baratootaa fi ummata Oromoo waliin dhaabaatanii mirga keessaniif falmachuu qabdu. Dubbiin Obbo Lammaa Magarsaa kana gaditi dubatee dhuga yoo ta’eef OPDOn badii kanan dura hojeete hunda irra bilisoomuuf deemti. Yoo akka Abbaan Dulla Gamada sochii baratoota fashalessuuf yeroo darbee dubate torban tokko booda ammoo qajeelfama TPLF fudhatee waan birroo dubachuu egalee yoo ta’eef OPDO daranu ykn caalaati ummata birati ni tufachisa. Yoo dhugaa ta’e garu dubbiin kun seena OPDO ni jijjira.
Dubbiin Obbo Lammaa Magarsa Dubatan Ejjeennoo Obbo Alemayo Atomsa wa’ee Magaloota Oromiyya irratti qabuun tokko jeedhame namoota heedduu yaada gadaa fi gamachuu walin makatee itti dhaga’amee jira. Jeechii kun seena OPDO keessatti yeroo jalaqabaf jeecha dhugan dubatame kan jeedhan fi baratoota sosobuuf waan ta’eef qabsoon itti fufuu qaba wara jeedhanitu jiru, kaanafi hassa kana akka jiruti dhiyeesine.
labsiin kun ummata keenya kan miidhu yoo taate, ni dhaabata. obbo Lammaa Magarsaa,
“Maastar Pilaanii Finfinneetis ummanni Oromoo yoo hin fudhanne hujii irra hin oolu jedhan. Maastar pilaaniin Finfinnee hujii irra ooluu fi dhiisuu isaa ilaalchisee, mariin jiraattota godina addaa Oromiyaa nannawa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Burraayyuu keessatti geggeeffamee akka jiru beekkameera. Qondaalota OPDO marii kana geggeessaa jiran keessaa afa yaa’iin Caffee Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa, jiraattota bulchiinsa magaalaa Burraayyuuf haasaya taasisaniin, murtii ummataa malee kongumaa maastar pilaaniin Finfinnee hujii irra ooluu hin qabu jedhan. Obboo Lammaan akka jedhanitti, amma booda bulchiinsi magaalaa Oromiyaa keessatti argamu kamuu, muramee mootummaa Federaalaa jala hin galu jedhan. Maastar pilaaniin Finfinnee haga fedhes faayidaa ummattootaa qabaachuu bira darbee, dachee fi samiidhaafis bu’aa kan qabu yoo taate, ummanni Oromoo haga hin fudhatinitti hujii irra hin oolfamu jedhan. Itti dabaluun obboo Lammaan akka hirmaattotaaf himanitti, Labsiin Caffee Oromiyaatiin murtaahee darbe kun, dogoggora kan qabaatu yoo taate, hambisuu fi jijjiiruu ni dandeenya jedhaniiru. Caffee Oromiyaa hoogganaa kan jiru ana kan jedhan obboo Lammaan, labsiin kun ummata keenya kan miidhu yoo taate, dhaabudhaaf humna aangoo gahaa qabaachuullee akkasitti ibsanii jiru. Sagaleen waraabbii galma wal gahichaa irraa nu dhaqabe akka ibsutti, hirmaattoonni marii kanarraa qooda fudhatan, maastar pilaaniin Finfinnee gonkumaa hojirra akka hin oolle cimsanii kan akeekkachiisan yoo ta’u, humnaan hojitti hiikuuf itti deemnaan garuu, rakkinoonni hedduun dhalachuu akka malanis ibsanii jiru. Labsiin magaalota ammoo kan dantaa saba Oromoo miidhu waan ta’eef, hatattamaan qoratamee siraahuu akka qabus hubachiisanii jiran. Waadaan Obbo Lammaa Magarsaa Maastar Pilaniin ni dhaabbata, labsiin magaalotaaas ni fooyya’a kan isaan jedhan kun, dhugummaan kana jechuu isaanii ni shakkina jedhu xinxaltoonni tokko tokko. Yeroo mormii waggaa lama duraatis obboo Abbaa Dulaa Gammadaa fi qondaalonni biraa waadaa walfakkaataa seenanis, qondalonni TPLF kan akka obboo Abba Tsahaayyee jaalattanis jibbitanis hojirra oola jedhanii dhaadachuu isaanii ni yaadatama. Kun Dubi Obbo Lamma Magarsaa dubatan kan nami birran bareefamati jijiree irra fudhanee. “
Wagga darbee qoofa dhimma finfinnee wal qabsisuun bareefama maxansiine keessa hanga tokko hojii qooranoof akka isiin gargaruuf madda (linke) fi mata duree isaa akka kana gadiiti dhiyeesina, madda (linke) kana kopi goochun google keessa galchitan banatan hunda isaa akka dubiftan isiin afeera. Oromoon qabsoo baratooni Oromoo geggeessaa jiran ta’ee irrati ilaaluu hin qabuu. Kun TPLF samiicha lafa geggesuuf ummata kana yeroob buqiisuu teeny ilaaluun seenatuu guyya tokko nu gaafata wareegama barbaachise kafale Maaster Plani samiicha fi seera Cafeen Oromiyan dhiyoo kana base jijjiruu qabna, sababin isaa seerii lachuun isaa Seera fi heera federalaa waan caabsuufi.
Amma booda bulchiinsi magaalaa Oromiyaa keessatti argamu kamuu, muramee mootummaa Federaalaa jala hin galu. Obbo Lammaa Magarsaa
Waa'ee dhimma magaalota naannoo finfinnee
Suura Baratootan Oromoo Kara naga FDG gegesuu egalan 25/11/2015
Lafti Oromoo km 1, 100, 000 diinaf keenamun hafee km Tokko ilee harka diinatti kufuu hin qabduu.
Oromoon ajjeefamuu, hidhamuu, biyya ari’amuu fi reebamun isaa erga hin oleefi dhaabbatee lolate bilisommuu qaba.
Research on Oromo Students Protest Movement Presented by OSA Members Prof. Asafa Jalata & Aad. Zeituna Kalil at World Social Forum in Tunisia
Finfinne versus Brussels differentiate the real democracy from fake democracy o
Mootummaa Mafia TPLF buqifnee abbaa biyya ta’un ala furmatii hin jiru.